အယ်ဖိုး: February 2010
Adobe pagemaker 7.0 မရှိတဲ့သူများအောက်မှာ ဒေါင်းလော့လုပ်ပြီးယူလိုက်ပါ .... part 1 ကို ဖြေလိုက်တာနဲ့ part2ကိုပါ သူက တစ်ခါတည်းဖြေပေးပါလိမ့်မယ် ... serial no ကိုတော့ အဲ့ဒီ့ထဲမှာပဲ Notepad နဲ့ထည့်ရေးပေးထားပါတယ် ..
PART-1 ။ PART-2
Posted by Peace at 1:13 PM0comments Links to this post
လာပြန်ပြီ ဒီတစ်ခါ Adobe Photoshop CS4 (Portable) တဲ့ . လာပဲလာနိုင်လွန်းတယ်မလုပ်နဲ့ မနည်းရှာထားရတာနော် . CS3 တောင် သုံးရတာ အချိန်မကုန်သေးဘူး . CS4 ကို Portable တင်ပေးလိုက်တာ .
Download mediafire >> Part-1 ၊ Part2 ၊ Part3
Download megaupload ၊ Download 4shared ၊ Download ifile.it ၊
Posted by Peace at 1:12 PM0comments Links to this post
Power Video Karaoke Pro v1.2.3
Power video karaoke ဆိုတဲ့ Software ကလေးပါ .. ကိုယ့် ကောင်မလေးကို ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် ကောင်ကလေးကို ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အပျင်းပြေ သီချင်းကလေးတွေကို စာသားလေးတွေလိုက်ထည့်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ် :) :) ... ကိုတောသားလေးရေ .. ဒီကောင်ကလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျာ.. အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. ဒီကောင့်ကို Full version ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့.....
အဲဒီ့အထဲက Cracked ဆိုတဲ့ Folder ထဲက PowerVideoKaraoke ဆိုတာကလေးကို Copy လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ ..
ပြီးရင်တော့ အောက်ကလမ်းကြောင်းကလေးအတိုင်းသွားလိုက်ပါဦး ..
C:\_Program Files\_Doblon\_Power Video Karaoke
အဲဒီ့ အတိုင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ စောစောက Copy ကူးလာခဲ့တဲ့ PowerVideoKaraoke ဆိုတာကလေးကို Paste ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ ..
အဲဒီ့မယ် Alert box ကလေးတက်လာပါလိမ့်မယ် .. ရှိပြီးသား ကြီးကို ထပ်ထည့်မှာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ .. Yes ပဲ ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ ..
ရပါပြီ ..... အဲဒါဆိုရင်တော့ Full version အဖြစ်အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီခင်ဗျာ .. ဒီအောက်မှာယူလိုက်နော် ..
Download link Power Video Karaoke (Multi)
Power Video Karaoke (I file )
Posted by Peace at 11:55 AM0comments Links to this post
Posted by Peace at 11:50 AM0comments Links to this post
အရမ်းကောင်းတဲ့ Paint ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Windows System မှာ ပါပြီသားဖြစ်တာထက် အရမ်းကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို ပြင်နိုင်တ...
Give USB Password
ကိုကို၊မမတို့ အတွက်ပါ၊တင်ပြီးသားရှိရင်sorryနော်၊မိမိရဲ့ USBကိုသူများအလွယ်တကူဖွင့်လို့ မရအောင်passwordပေးပြီးမိမိရဲ့ ဖိုင်တွေကိုသိမ်းထားလို ...